Ukuba ufuna intetho ngoYesu nendlela ukuze asindiswe? | Apg29
Yenza oku ku Apg29 okanye uqale usindiso lwakho blog!
Ngamanye amaxesha sifuna ukuba sibe djuplodade kunye clever kunye brösta nathi kunye nolwazi lwethu olukhulu, kodwa ulwazi lwethu enkulu intellectualism kunokuthintela abantu basindiswe. Olu lwazi enkulu ndingekawuboni abayithintelayo umyalezo olula zosindiso kuYesu Kristu.
Ndathi Ndiye phambi kwaye ndiza kuthi kwakhona: ndingqinisisa blogs usindiso lamaKristu apho ngokulula ubhale ngoYesu nendlela basindiswe!
Kukho blog ezininzi online kwaye kukho blog ezininzi zamaKristu, kodwa uninzi lwazo blogs zokufundisa okanye blogs ndiye kulwa amahlelo. Bona zisoloko sibhekiswe kumaKristu. Ngale ndlela ulibale ukuba kujoliswe abangakholwayo kunye kuzigqobhozela uYesu.
Kukho imfuneko enkulu naziphi na ezinjalo blogs usindiso. Mna ngokwam i site blog ebizwa apg29.nu apho ndiya kushumayela umyalezo usindiso eya olungagcinwanga. - Kwaye abantu zigciniwe abaye batyelela le blog!
Uninzi ufuna ukufundisa sele amaKristu
Kwakhona ukunika igumbi kunye nendawo umfundi e-mail blogs lundwendwe, kodwa mna ndiza kuba ngokunyaniseka, abantu abaninzi bafuna ukuba asifundise ukuba sele iguqulelwe. Kodwa kufuneka ngaphezu ubungqina ngonaphakade elula ukuya olungagcinwanga ukuze basindiswe ngayo.
Ndiya kuthi ukuba: Uninzi lwezi blogs zemfundo kunye profundity ayicacanga uYesu livimbela abantu ukuba bamamkele; kuba andiqondi ukuba ezi profundities kuthetha njengenxenye bröstar nolwazi zayo!
Ngoku ke indlela emangalisayo, izixhobo kunye namathuba afumanekayo kuthi ukuze bafikelele a lwesintu uwe kwivangeli likaYesu Krestu. Makhe senze oko. Akukho singazibambezeli likhwelo lethu ukuphumeza iKomishoni Enkulu ukuba uYesu asinike zona.
Ngoko ke ndibiza ukuba undixelele malunga ukuze basindiswe njani, yaye kufuneka ukwamkela uYesu Kristu. Ndixelele ngoYesu. Kufuneka ukuba ukunika ubungqina bethu ukuba abantu esiphila nabo - Kufuneka kanye ukuxoxa kwakhona babe!
Guest Blog Reader mail
Ufuna ukubhala isithuba yeendwendwe blog kwi blog yam, okanye umfundi e-mail? Ukuba ufuna ukuthumela ubungqina lakho ukuze basindiswe njani? Yenza it! Kukho Kufuneka ngakumbi oku ngakumbi kunanini na ngaphambili.
Abantu kufuneka ukuva indlela abanye abantu abaye kwafuneka ebusweni uYesu basindiswe. Kufuneka umyalezo kaYesu ngendlela elula. Xa loo ndlela lokuba unako kubanika. Akukho mfuneko imfundiso djuplodad.
umhlobo wam othandekayo, uthumele ubungqina bakho likaYesu Kristu ukuba apg29.nu. Ngaphezu koko, bekuya endikuthandayo ukuba uqale blog apho ndingqina nentetho ngoYesu!
Mna Sithathe ixesha wafuna usindiso iiblogu kwaye kunzima kakhulu ukufumana ngenxa yesizathu esilula ukuba kulingana. Kodwa ungakwazi ukuqala i blog! Bhala ngoYesu nendlela ukuze basindiswe. Uya kuphumelela abantu abanjalo.
Uya kufika abantu ubuya soze ufike ngenye indlela. Yenza ke umhlobo wam oyintanda, uThixo anisikelele!